“Peace isaprocess“: An interview with Professor Dr Aung Tun Thet
An interview with Professor Dr Aung Tun Thet
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်နှင့် အင်တာဗျူး
Forum: We are very pleased on the PK Forum and New Mandala to have with us Professor Dr Aung Tun Thet,amember of Myanmar’s Peace Commission.
ဖိုရမ် - ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ PK Forum နဲ့ New Mandala အတွက် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
ဒီပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပုံဟာ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ အခု EAO (တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ) လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်တဲ့ အဖွဲ့တွေကြား နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိတဲ့ အလှူရှင် အုပ်စုတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေ ရှိပါတယ်။
Forum: What kind of outcomes are you looking for from that aid?
ဖိုရမ် - အဲဒီထောက်ပံ့မှုကနေပြီး ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လို ရလဒ်မျိုးကို လိုချင်ပါသလဲ။
In terms of the whole peace process we have established priority areas, so hopefully the money that comes in will be focussed on that.
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဦးစားပေး နယ်ပယ်တွေကို သတ်မှတ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဝင်လာတဲ့ ငွေတွေဟာ ဒီအရာတွေပေါ်မှာ အဓိကထားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။